Eto ianao: Home / triatra / Ccleaner Professional Edition Latest vaky
Ccleaner Professional Edition Latest vaky
Aprily 3, 2017 By Albert Trotter Leave a Comment
Various programs promise to speed up a slow computer and CCleaner Professional is one of them. You may see people recommending it on forums and mentioning it in various blog posts but what is CCleaner and does it make PC run faster? CCleaner Professional Crack is a utility that is designed to perform basic maintenance of the Windows-based computer. Misy fitaovana amin'ny kapila madio ho vetivety fanadiovana raki-daza, miaraka amin'ny lisitra madio mba hanala tsy ampy na ratsy lisitra anglisy sy ny fitaovana fitantanana ny Startup zavatra ary esory ny rindrambaiko. Plus afaka hanamarinana antontan-taratasy sy namaoka maimaim-poana kapila toerana mba hiarovana ny fiainana manokana. Dia ho PC no CCleaner ny hazakazaka haingana?
Eny, izany no, fa kely noho ny Windows naorina-in kapila fanadiovana jiro mitambatra amin'ny alalan'ny rindrambaiko uninstalling ny fanaraha-maso sy ny fampiasana MSConfig tontonana ny fitantanana startup entana. Manadio tratran'ny mpanara sy ny fitantanana nametraka rindrambaiko Natomboka ny ordinatera. Ny mahatsara ny CCleaner dia fa afaka hanary ny tratran'ny mpanara antontan-taratasy sy ny fitantanana ny lisitra entana sy ny rindrambaiko avy amin'ny toerana iray nefa tsy voatery mifamadika eo samihafa Asa vaventy. koa, dia manana lisitra madio izay handamina ny sasany amin'ireo lisitra diso eo amin'ny solosaina. Na izany aza, raha te-hanao ny solosaina haingana be, CCleaner dia tena tsara fanadiovana utility, tsy ampy endri-javatra ka tsy defragment ny mafy aelin'ny sy ny lisitra, fa mba hahazo ny zavatra tanteraka, ianao maintsy télécharger un kapila defragmenter mba hanafainganana ny PC.
CCleaner manaisotra antontan-taratasy tsy ilaina toy ny raki-daza soa aman-tsara tratran'ny mpanara izay mamela ny rafitra mihazakazaka haingana kokoa.
Tsy manadio fampiharana cache lahatahiry manan-danja sy erases ny navigateur tantara sy ny mofomamy, ka na inona na inona ianao mijery hijanona ho tsiambaratelo sy ny tsy miankina ka tsy misy peeks ao ary koa manampy amin'ny fanadiovana ny fiaraha-mientana an-tserasera.
CCleaner Professional Crack can be used to delete the memory storage of your mobile devices as well such as delete your cell phone’s call logs, na ny zavatra hafa tsy ilaina hafatra zavatra avy amin'ny rafitra.
Manome fitaovana avo ny hafainganam-pandeha sy ny finday avo lenta streamlines na tablette. CCleaner Mora esory fampiharana maro niara-izay tsy mahasoa anareo intsony.
Koa satria ao amin'ny vanim-potoana isika dia miaina, dia manana be dia be ny asa ara-teknika eo amin'ny ordinatera, na finday hamonjy manan-danja tahirin-kevitra na antontan-taratasy izany, mila entana ny toerana mba voaangony azy ho amin ', ary CCleaner manampy antsika amin'izany ihany koa izay manafaka ny toerana fitahirizana sarobidy eo amin'ny fitaovana.
Manampy anao manatsara ny tolotra sy ny aterineto, ary manana fitaovana mba tweak Windows toe-javatra miaraka amin'ny tsindry.
Izany ihany koa dia manana startup izay mamela anao intsony izay fandaharana izay mihazakazaka mandritra ny varavarankely fanombohana ny. Azonao atao ihany koa ny mijery izay efa naka fiara mafy indrindra ny toerana eo amin'ny rafi-amin'ny alalan'ny kapila Analyzer.
Furthermore, you might have come across when you have several files with the same data that you do not know or hidden somewhere, dika mitovy izay nahita dia manaiky azy ireo sy mamafa azy tsy ho fitaovana.
Azonao atao ihany koa ny rafitra indray fanjakana amin'ny CCleaner ary farany ny fiara wiper endri-javatra dia manampy anao madio ny fiara rehetra izay mifidy ianao, ary manana ny antontan-taratasy maharitra ho babo eny amin'ny kapila mafy.
Download apk nanome
Filed Under: triatra